केपी ओलीको पछिलाग्दा भीम रावलको यसरी भयो पत्तासाफ ! – GALAXY
केपी ओलीको पछिलाग्दा भीम रावलको यसरी भयो पत्तासाफ !
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पछि लाग्दा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल पावरको पत्तासाफ भइको छ । केही महिनाअघिको घटना ताजै छ, जतिबेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीबाटै निर्णय गराएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र पार्टीका अधिकांश सांसदलाई ‘होल्ड’ गर्नसक्ने पावर भएका उपाध्यक्ष भीम रावलको पकड यतिबेला धुलो–माटो भएको छ । उपाध्यक्ष रावल अध्यक्ष ओलीको पक्षमा लागेर नेता माधवकुमार नेपाललाई धोका दिएपछि सुदूरपश्चिमका १० जना प्रदेशसभा सांसद एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी पार्टीमा लागेका छन् ।